Umatshini wokurhola umbhobho weDredge, abaXhasi - Abavelisi baseHose Dredge Hose
Ukukhutshwa kwethumbu lokurhoxisa i-ZEBUNG Irabha yokuThoba iRubber ziyinjongo ezakhelwe iimfuno ezizodwa zabaxhasi bethu. Sikwindawo yokwakha ubungakanani beethumbu ukusuka kwi-100 mm ID ukuya kwi-ID ye-2200 mm. Abaqulunqi bethu baya kukhetha ezona zixhobo zifanelekileyo kuluhlu olubanzi lweemveliso ezikhoyo kuthi ukuhlangabezana neemfuno zenkonzo kunye neemfuno eziceliwe ngabaxumi bethu okt ukunxiba ukuxhathisa, ukulinganisa uxinzelelo, amandla oqiniseko, ukugoba amandla kunye nezinye iiparameter. Ngokubanzi ...
I-slurry suction hose ZEBUNG Rubber Dredging Hoses ziyinjongo ezakhelwe iimfuno ezizodwa zabaxumi bethu. Sikwindawo yokwakha ubungakanani beethumbu ukusuka kwi-100 mm ID ukuya kwi-ID ye-2200 mm. Abaqulunqi bethu baya kukhetha ezona zixhobo zifanelekileyo kuluhlu olubanzi lweemveliso ezikhoyo kuthi ukuhlangabezana neemfuno zenkonzo kunye neemfuno eziceliwe ngabaxumi bethu okt ukunxiba ukuxhathisa, ukulinganisa uxinzelelo, amandla oqiniseko, ukugoba amandla kunye nezinye iiparameter. Ngokubanzi i-ZEB ...